မြို့ခံမဟုတ်သော လူမျိုးခြားများကို မြို့ပြင်ထုတ်ရအောင် (မန္တလေး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » မြို့ခံမဟုတ်သော လူမျိုးခြားများကို မြို့ပြင်ထုတ်ရအောင် (မန္တလေး)
မြို့ခံမဟုတ်သော လူမျိုးခြားများကို မြို့ပြင်ထုတ်ရအောင် (မန္တလေး)
Posted by MandalayThar on Mar 11, 2012 in Cultures, Environment, History, Home & Garden, How To.., Ideas & Plans, Society & Lifestyle, Travel | 23 comments
ပထမဦးဆုံး ဒီပို့စ်ဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြားလိုခြင်း၊ တခြားလူမျိုးခြားများကို ဆော်ကားလိုခြင်းမျိုး လုံးဝ မရှိကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ ဖြစ်နေတဲ့ ပြသာနာကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆို ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့မှာ မန္တလေးမြို့ခံ (ဒီနေရာမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ လို့ မသုံးပါဘူး၊ မြို့ခံလို့သုံးထားပါတယ်။ ဗမာ၊ တရုပ်၊ ကုလား အစုံ ပါတဲ့ မန္တလေးမြို့ ပေါက်၊ မန္တလေးမြို့မှာကြီး၊ မန္တလေးကို သံယောဇင်ကြီးတဲ့ မန္တလေးမြို့သူ/သား တွေကို ဆိုလိုတာပါ။) ဒီမြို့ခံ တွေဟာ မြို့အပြင် မြို့သစ်ကို ရောက်ပြီး မြို့ထဲမှာ တခြားသော လူမျိုးခြားများ နေရာတဖြည်းဖြည်း နေရာဝင်ယူနေကြပါပြီ။ မြို့ရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ ခေတ်အခြေအနေ၊ မီးလောင်မှု့များ၊ အစိုးရ ညံဖျင်းသော ပေါ်လစီ၊ ခေတ်ရဲ့ လက်ပေးလက်ယူမှု့ တွေကြီးထွားလာမှု့၊ စည်ပင် လဝက တို့ရဲ့ နိုင်ငံတော် အပေါ် သစ္စာဖောက်မှု့ စတဲ့ အခြေအနေအကြောင့် ဖြစ်လာရတယ် ဆိုတာအားလုံးလဲ သိပြီးလောက်ပါပြီ။ ဖြစ်သွားပြီ။ အခုမှတော့ မလက်ခံလို့ မရတော့ဘူး။ ဒီအခြေအနေကို လက်ခံရတော့မယ်။ ပြန်ပြီး အကောင်းဆုံးကို လုပ်ဆောင်ကြရအောင်ပေါ့။
ခေါင်းးစဉ်မှာ ပြောခဲ့သလို “မြို့ခံမဟုတ်သော လူမျိုးခြားများကို မြို့ပြင်ထုတ်ရအောင်” ဆိုတာ ဟိုခေတ် အစိုးရလုပ်သလို။ အာဏာနဲ့ သွားပြီး တိုက်တွေပေါ်က ဆွဲချ၊ မြို့သစ်ကို ပို့ပစ်၊ မြို့ခံတွေ နေရာပြန်ချပေး၊ အဲဒီလို လိုလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။
ဒီတော့ အခု မန္တလေးဟာ မြို့ဧရိယာကို ချဲ့လာတာဟာ။ တောင်မှ မြောက်ကို ချဲ့လာတဲ့ ပုံပါ။ အနောက်ကဧရာဝတီရှိလို့ ချဲ့မရသလို အရှေ့က အောင်ပင်လယ်ကြီး ခံနေတယ်။ မြောက်ဘက်ကျ ဟိုဘက် အိုးဘိုအကျော် လယ်မြေတွေဘဲရှိတော့ ချဲ့စရာဆိုလို့ ရန်ကုန် မန္တလေးကားလမ်းရှိတဲ့ တောင်ဘက်ဘဲရှိပြီး မြို့သစ်ကို ချဲ့လာတာဟာ အခုဆို မြစ်ငယ်နားရောက်နေပါပြီ။
အဲဒီတော့ ယခင် မြို့အလယ်ခေါင် ဖြစ်တဲ့ ၈ဝ × ၈၄ × ၃၅× ၂၆ တွေဟာ မြို့ ရဲ့ အစွန်းပိုင်းလောက် ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ အဲဒီနေရာရဲ့ မြေဈေးဟာလည်း ကြောက်ခမန်းတိတိဖြစ်နေပြီး၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မြို့ခံတွေကပ်နိုင်တဲ့ ဈေးမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ယခုဆို ယခင်က မြို့သစ်လို့ခေါ်တဲ့ နေရာတွေဟာ မြို့ ပုံစံအရ မြို့လည်လောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ လမ်းတွေ ကောင်းဖို့ လိုပါသေးတယ်။
ပြောချင်တာက ရှင်းရှင်းလေး မြို့ခံတွေပြောင်းပြီး နေနေရတဲ့ မြို့သစ်ကို ပိုပြီး စည်ပင်အောင်လုပ်၊ လမ်းတွေကို ကောင်းအောင်လုပ်၊ ဈေးတွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ ဥယျဉ်တွေ၊ အပင်တွေနဲ့ စိမ်းစိုနေအောင်လုပ်။ ခြောက်ကပ်နေတဲ့ လမ်းတွေကို စိမ်းစိုနေအောင် သစ်ပင်တွေစိုက်ကြ။ မြို့သစ်မှာ အခြေပြန်ချနေရတဲ့၊ မြို့ခံတွေစည်းလုံးကြ ယခင်ကလို့ မြို့သစ်ရပ်ကွက်တွေ အလိုက် ဘုရားပွဲတွေ ဘာတွေကျင်းပကြ။ (ယခင်ကရှိခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက်ဘုရားပွဲတွေဟာ မြို့သစ်မှာ ဘာလို့ ပြန်လုပ်နိုင်ကြတာလည်း စဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ် မြို့သစ်ကလူတွေ မစည်းလုံးလို့လား) မြို့သစ်က ရပ်ကွက်အလိုက် မြေကွက်တကွက် အပင်တပင်နနှု်းထွက် စိုက်ရမယ်ဆိုရင် နောင် ၅ နှစ်လောက်ဆို မြို့သစ်က တောတော်စိမ်းစိုလာမှာ။ နောက် ဟိုးတုန်းက မန္တလေးကဆိုက်ကားသမား (နာမည်တော့မေ့သွားပြီ လူထုဒေါ်အမာ ဆောင်းပါးရေးခဲ့ဘူးတယ်) တစ်ယောက်လို မြို့ အနှံ ဆိုက်ကားမောင်းရင် တမြို့လုံးကို အပင်တွေ စိုက်သွားပေးခဲ့တယ်။ ဒါမျိုး လူတွေ ပေါ်ပေါက်လာအောင် အားပေး ၊ သူကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ရက်တရက် ကို သတ်မှတ်ပြီး အပင်စိုက်ပွဲတွေဘာတွေလုပ်။ ဒါဆိုရင် မြို့သစ်ဟာ နေချင်စရာကောင်းတဲ့ မြို့ခံတွေရဲ့ နေရာသစ် မြို့လေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ယခင်က မြို့လည်ဖြစ်ပြီး၊ လူမျိုးခြားတွေ အုပ်စိုးမင်းမူနေတဲ့ မြို့ဟောင်းဟာ အစွန်အဖျားရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီလိုနဲ့ မြို့ခံမဟုတ်သော လူမျိုးခြားများကို မြို့ပြင် ထုတ်ရအောင်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာ။ ဒီမြို့ဟောင်းကြီးကို သံယောဇင်တော့ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုအခြေအနေက ဘယ်လိုမှ လက်မခံလို့လဲ မရတော့တဲံ အခြေအနေဖြစ်သွားပြီ။ လုပ်သင့်တာကို အကောင်းဆုံးလုပ်ယုံဘဲရှိတော့တယ်။
စည်ပင်ကလူတွေကလည်း ကိုယ့်လူမျိုး ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်၊ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်မြို့ခံတွေနေနေရတဲ့ မြို့သစ်ကို စည်ပင်သာယာအောင် အထူးလုပ်ကြပါ။ တကယ်ဆို သူတို့တွေလည်း မြို့သစ်မှာ နေနေရတဲ့လူတွေဘဲ။ မြို့ကို မချစ်တောင် သူတို့ ကိုယ့် အဖိုကို ရက်တဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ်နေတဲ့နေရာ ကို ကောင်းအောင်လုပ်ပေါ့။ ဟိုတုန်းက လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ အခု တာဝန်ယူပြန်ယူသင့်တဲ့ အချိန်မှာ ပြန်တာဝန်ယူပေါ့။ ဒီစာကိုလည်း တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ ဖတ်မိပြီး၊ လုပ်သင့်တာကို လုပ်မိအောင်ရေးဖြစ်တာပါ။
ဒီပို့စ်ကနေ မန္တလေးမြို့ကို ချစ်တဲ့ မြို့ခံတွေ ပြန်ပြီး ဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်။
အစိုးရ ပံ့ပိုးမှု မပါဘဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး…။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှု အကျိုးစီးပွားပေါ် အများကြီး မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်မြေဈေးကွက်ဆိုတာ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းနဲ့ အများကြီးဆိုင်လို့ အစိုးရသာ လိမ်မာပါးနပ်ရင် တသိန်းတန်မြေကွက် သိန်းတထောင်တန်အောင် လုပ်ပြီး ငွေရှာလို့ရတယ်….။ အရေးကြီးတာ အတ္တနဲ့ပရ အကျိုးစီးပွားနှစ်ခုယှဉ်တဲ့အခါ ဘယ်ဖက်ကို ဦးစားပေးသလဲဆိုတာပဲ…။ ဈေးကွက်စီးပွာရေး ဖွင့်ပြီး ၁၉၈၈ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်တွေ့လာရတာကတော့ ဘယ်ဂွင်ဖြစ်ဖြစ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ သူတို့ခရိုနီတွေပဲ အဆီအနှစ်တွေ စားသုံးခွင့်ရကြတယ်…။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိသ၍ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ် မပေါ်ပေါက်သ၍ စောင့်ကြည့်သတင်းယူမည့် စာနယ်ဇင်းမီဒီယာ မထွန်းကားသ၍ ဘာလုပ်လုပ် သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း ဖြစ်နေအုံးပါမယ်…။
လူထုဒေါ်အမာ ဆောင်းပါးရေးတဲ့ ဆိုက်ကားသမားက ဦးငွေလို့ခေါ်ပါတယ်
သူစိုက်ခဲ့တဲ့ အပင်ပေါင်းက ၅၀ဝကျော်ပါတယ်။
၃၅လမ်း ၈၄နောက်ပိုင်းဆို သူစိုက်ခဲ့တဲ့အပင်တွေခုထိရှိပါသေးတယ်။
ဘယ်ကောင်က အနီရောင် လက်ကမြင်းသွားတာလဲ
မြို့ထဲမှာက တရုတ်အိမ်တွေကြည့်ဘဲ ဆောက်ထားတဲ့တိုက်တွေကလည်း အလန်းတွေ
သေရင်နေဖို့ ၆ပေ၄ပေ တိုက်ခန်းလေးတော့ဝယ်ထားတယ်။
ဪ မြေဈေး .. မြေဈေး .. ၊
ရှိနေတဲ့ သူတွေ အတွက် ကောင်းပ ..၊
နောက် ဈေးထပ်တက်ရင် အခု ရှိနေတဲ့ ၁ ပေ ပတ်လည်ဈေးနှုံးနဲ့ သေရင်နေဖို့ ၆ ပေ ၄ ပေ လေးကို
ဝယ်နိုင်ဖို့ တောင် ခက်လာတော့မယ် ထင်မိတယ် ..၊
ဟာ .. တက်ပလေ့စေ ..၊
သေရင် မြေမှာ မမြှုပ်ပဲ ကြိုးသိုင်းနဲ့ အပင်မှာ ချိတ်တွဲပြီး စီစဉ်လိုက်တော့မယ်…။
မန်းလေးသူ မဟုတ်ပေမယ့် မန်းလေးမြို့ကြီး လှစေချင်ပါတယ်။
စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး ယနေ့ကစလို့ ပြုပြင်လိုက်ပါနော်။
နောက်တော့လည်းဖြစ်လာမှာပါ တစ်အောင့်တော့ စောင့်ရမှာပေါ့
ကယ်လီဖိုးနီးယား.. လော့စ်အိန်ဂျလိစ်.. အာကေးရီးယားမြို့နယ်အကြောင်း တို့ထိပြမယ်..
အရင်က.. အဖြူတွေချည်းနေတာ…။ မြို့ခံတွေပေါ့…
အင်မတန်သာယာပြီး ဒေါင်းတွေရှိတဲ့မြို့.. ချမ်းသာသူတွေနေတဲ့မြို့.. အယ်လ်အေကောင်တီရဲ့.. နှစ်အကြာဆုံးမြို့တွေထဲကတခုပေါ့..
အခုဆို ဘို(အဖြူတွေ) ဘုံပျောက်ပြီး.. အေရှန်းတွေကို..သူတို့မြေ..အိမ်တွေရောင်းစား.. ထွက်သွားကြလိုက်တာ.. သိပ်တောင်မကျန်တော့ဘူး..။
ရောင်းမှာပေါ့.. အိမ်မြေဈေးတွေဒလဟောကျလာတဲ့.. ပြီးခဲ့တဲ့.. ၄-၅နှစ်မှာတောင်.. အဲဒီနယ်က..ဈေးမကျတာ..
ဘိုတွေ.. ဈေးတင်ရောင်းပြီး.. ရတဲ့ငွေတွေနဲ့.. နယ်မြို့မှာ.. အေးဆေး.. သွားနှပ်နေကြတော့တာလေ…။
အေရှန်တွေ.. အာကေးရီးယားကနေ.. တောင်ဖက်သိမ်းလာလိုက်တာ.. ဆန်ဂဘရီယယ်မြို့ဆို.. ဒုတိယချိုင်းနားတောင်းတောင်ဖြစ်နေပြီ..
ကျေးဇူးတောင်တင်နေပုံပဲ..။ ဈေးကြီးနဲ့ရောင်းတော့.. အခွန်တွေများများရမှာပေါ့..။
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး.. ကွန်ဂရက်အမတ်တွေပါ.. အေရှန်တွေခန့်ထားတယ်..။
. နယူးယောက်.. ဆန်ဖရမ်စစ္စကို.. အဲဒီမြို့တွေအကြောင်းလည်းရေးပြချင်သေးတယ်..။
ပြန်ချုံ ့ပြောပြရင်.. အစိုးရပေါ်လစီကောင်းကောင်းချတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်..။
အင်မီးဂရန့်တွေ.. ဆယ်စု၂ခုလောက်.. ချာလပါတ်လည်ပြီး.. မြို့ခံနယ်ခံတွေအတွက်.. ဘဝရင်းနှီးပြီး.. အလုပ်လုပ်ပေးနေရတာဖြစ်ရော..။
ပြီးခဲ့တဲ့ဥပုဒ်နေ့က ကိုဝင်းအောင်ရဲ့ သားလေး မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးတာဖိတ်ထားတဲ့
ရွှေကျောင်းကြီးနားလေးက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို အောင်မောင်းနဲ့နှစ်ယောက်သားသွားဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုဝင်းအောင် ချွေးမလောင်းလေး ရဲ့မိဘတွေ သဘောကောင်းပုံကတော့ တကယ်ကိုလေးစားလောက်ပါတယ်။
“ကလေးနှစ်ယောက် အတွက် မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲကို သတ်သတ်မလုပ်တော့ဘဲ သံဃာတော်တွေကို မင်္ဂလာဆွမ်းကပ်ရင်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို ပါ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ တစ်ခါတည်းဖိတ်ပြီးဧည့်ခံလိုက်မယ်။
နှစ်ဖက်မိဘကလဲ ချမ်းသာသူတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် မင်္ဂလာဆောင်တာကို ကိုယ့်အိုးနဲ့ဆန်တန်ရုံလောက်ဘဲလုပ်မယ်။
နောက်ပြီး မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဘို့ ရာထား ထားတဲ့ငွေတွေကိုု ဘဝအသစ်စမယ့်ကလေးတွေလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ကြရင် ပိုကောင်းမယ် နောက် မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ့်ကလေးနှစ်ယောက်လည်း အပိုကုန်တာတွေမလုပ်နဲ့၊
တကယ်လိုတာလောက်ဘဲဝယ် ပကာသနမလိုဘူး “ဆိုတာကို လာပြီးတောင်းရမ်းစဉ်ကတဲက
အဲဒီမင်္ဂလာပွဲလေးမှာ အေးအေးဆေးဆေး စားကြသောက်ကြ စကားပြောကြရင်း အောင်မောင်းနဲ့ ညနေခင်းမှာဆက်တက်ရအုံးမယ့် မင်္ဂလာပွဲလေးအတွက်ချိန်းလိုက်ကြပါတယ်။
(ဒီမင်္ဂလာဆောင်လေးကလဲ မြန်မာလူမျုးိတွေဆောင်တာဖြစ်ပေမယ့် မိတ်ဆွေတွေကိုညစာစားပွဲနဲ့ဧည့်ခံမှာပါ။
အရင်ကတော့ မင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင် ကိုယ့်လူမျိုး ဓလေ့စရိုက်အတိုင်းကျင်းပတတ်ကြပါတယ်။
မြန်မာမှန်ရင် ပထမရက်က အိမ်မှာ မင်္ဂလာဆွမ်းကြွေးမယ်။
နောက်နေ့ မနက်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ် ညနေပိုင်းဖြစ်ဖြစ် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲလုပ်မယ်။
ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ပြီးဝါသနာပါသူများက မင်္ဂလာအောင်ပွဲဆိုပြီး အငြိမ့်ငှားလို့ အရပ်ကိုဧည့်ခံမယ်။
တရုပ်လူမျုးိများကတော့ အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်းမှာ မိတ်ဆွေများကို လက်ဖက်ရည်ပွဲတည်ခင်းလို့ဧည့်ခံတတ်ပြီး
ညနေပိုင်းမှသာ သိပ်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကိုထမင်းစားပွဲနဲ့ဧည့်ခံပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာထဲကတတ်နိုင်သူတွေကလည်း မိတ်ဆွေတွေကို ညစာစားပွဲနဲ့ဧည့်ခံကြပါတော့တယ်။
ဘယ်လိုဘဲပြောပြော မိတ်ဆွေတွေကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးတယ်ဆိုတာကောင်းသောအလေ့အထပါဘဲ။
အဲဒါပေမယ့် ထမင်းစားပွဲပါရင် လက်ဖွဲ့ကတော့ ခါတိုင်းထက်ပိုထည့်ရသပေါ့။
အခုမြန်မာတွေမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုရင်လဲ မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကတည်းက ဓါတ်ပုံဆိုင်ကိုသွားပြီး
ဗမာလို ဘိုလို တရုပ်လို ကိုရီးယားလို ဂျပန်လို ဝတ်စုံတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြပါတယ်။
ပြီးရင်အလှဆုံးဆိုတဲ့ပုံကို ပုံကြီးချဲ့လို့ မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပရာ ခန်းမရဲ့အဝင်ဝမှာ ထောင်ထားပါတယ်.။
ဒါပေမယ် အဲဒီပုံမျုးိတွေက အနောက်တိုင်းဝတ်စုံနဲ့သာများပါတယ်။
မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ ဝတ်ပြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားပါဘဲ။
တစ်ခါက မြန်မာမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာ သတို့သား သတို့သမီးရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကစလို့ လက်ရှိအချိန်ထိ ဓါတ်ပုံတွေကို
သီချင်းထဲမှာ ထည့်ပြီး ပရိုဂျက်တာနဲ့ထိုးပြထားတာကို လဲ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရပါသေးတယ်။
မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးကပြန်လာတော့မြောက်ကျုံးလမ်းအတိုင်းအနောက်တည့်တည့်ဆင်း 12လမ်းဒေါင့်ရောက်မှ အနောက်ကျုံးလမ်းအတိုင်းတောင်တည့်တည့် ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
အနောက်ကျုံးလမ်းအတိုင်းလာရင်းကနေ အိမ်ထောင်ကျစက ငှားနေခဲ့တဲ့ရပ်ကွက်ကလေးကိုဖြတ်ပြန်လာတော့ ကိုယ့် ငယ်ဘဝလေးကိုပြန်သတိရပါတယ်။
ဟိုငယ်ငယ် အဖိုးအဖွားတွေလက်ထက်ကတော့ အိမ်ပိုင်ယာပိုင်လေးပေါ့။
နောက် တော့ လဲ လူ့ဘဝအကြောင်းကိုယ်သိပ်မသိသေးခင်မှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာတော့ မမှတ်မိပါဘူး သိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့အိမ်ငှားနဲ့နေ တစ်အိမ်ကနေ တစ်အိမ်ပြောင်းနေရတာကိုဘဲ မှတ်မိနေပါတော့တယ်။
အိမ်တစ်ခါပြောင်းရင် တစ်ခါဒုက္ခရောက်သလို သိမ်းဆည်းထားဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများကလဲ
ပျောက်လိုပျောက် ပျက်လိုပျက်အမှိုက်ဘဝရောက်လို့ရောက် မသယ်နိုင်လို့ ချန်ထားခဲ့ရတာနဲ့ အလေးမခံနို်င်လို့ သူများကိုပေးခဲ့ရတာနဲ့ တကယ်ကို့နှမျောစရာကောင်းလှပါတယ်။
ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ကျတော့ 1983ခုနှစ်ပါ။
သာမန်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဘေးပေါက်မရှိတဲ့ ဌာနက ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အပြင် အပိုဝင်ငွေကိုရှာလဲမရှာတတ်တဲ့မိဘဖြစ်သူက သားသမီးကို အမြင့်ဆုံးပညာတတ်အောင်သင်ပေးနိုင်တာကလွဲပြီး ငွေကြေးဥစ္စာဓနဆိုတဲ့ အမွေတွေဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်
အိမ်ထောင်ကျကျခြင်းဆိုတော့ ကျွန်တော်ကလဲ လခစားဝန်ထမ်း၊ မဒမ်ပေါက်ကတော့ မှီခိုသူ၊
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်က ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာလုပ်ပါတယ်။
အိမ်လခက တစ်လ 75ကျပ်။
(12ပေပါတ်လည် မြေစိုက်တဲလေး၊လျှပ်စစ်မီးကတော့ ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံကိုအလှူငွေထည့်ပြီး မီးတစ်ပွင့်ဆွဲပေးထားတယ်။
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တစ်ကျပ် ထပ်တစ်ရာ ပလာတာတစ်ခုတစ်ကျပ် မုန့်ဟင်းခါးငါးမတ်ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ မြီးရှည် နှစ်ကျပ်
ဘယ်လိုဘဲပြောပြော စစ်စစ် စီစီနေ တပါတ်မှာ တစ်ခါရုပ်ရှင်ကြည့် ညဆို တစ်ရက် တစ်မတ်တန် မဂ္ဂဇင်းအဟောင်းကို ငှားဖတ် သိပ်မပြည့် စုံပေမယ့် စိတ်အေးလက်အေးဆိုတော့ ဘဝက နေပျော်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လဲ တစ်ခါတစ်လေ လမကုန်ခင်ငွေကုန်တော့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ ဆွဲရတာပေါ့။
အိ်မ်ထောင်ကျပြီး လေးလလောက်ကြာတော့ လူကြီးများရဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်မှု့နဲ့မဒမ်ပေါက်က
အဲတော့ အရင်လို မကသီဘဲအဆင်ပြေပြီး နည်းနည်းလေးပိုသုံးနိုင်လာတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် (2)နှစ်တစ်ကြိမ် အိမ်ငှားဘို့ စပေါ်တင်ဘို့အတွက် ခေါင်းထဲအမြဲထည့်ထားရတာကလဲအလုပ်တစ်ခု။
တစ်ခါစပေါ်တင်ထားရင် အိမ်လခကို အဲဒီစပေါ်ထဲကဘဲ နှိမ်နှိမ်သွားတာကိုး။
ဒီတော့ အိမ်ရှင်က တစ်ခါထပ်ငှားဘို့ စာချုပ်ရင် တစ်ခါဈေးတက်ပြီး စပေါ်တစ်ခါတိုးတောင်းပါတယ်။
(အခုတော့ အိမ်ငှားတဲ့ ပုံစံတွေပြောင်းကုန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တုံးကလိုစပေါ်တင်စရာမလိုဘူး။
တစ်လဘယ်လောက်ဆိုတာ သတ်မှတ် ပြီး(6)လစာဆို (6)လစာ တစ်နှစ်ဆို တစ်နှစ်စာ အပြတ်ပေးရပါသတဲ့။
အကြာကြီး မငှားတော့ ပါဘူး တဲ့၊
နှစ်စေ့ရင် ဘဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ရှင်ကအိမ်ရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ငှားတွေက ဆင်းမပေးဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာကင်းအောင်ပါတဲ့)။
အိမ်ငှားနေရတာစိတ်ညစ်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ နောက်တစ်ကြိမ်စာချုပ် ချုပ်ခါနီးပေါ့။
အဲဒီတုံးက ကျွန်တော့် အိမ်ရှင်က (2)နှစ်တစ်ကြိမ်စာချုပ်ချုပ်ပါတယ်။
နှစ်စေ့လိုစာချုပ် ချုပ်ခါနီးပြီဆိုရင် အိမ်ရှင်က အိမ်လခတိုးတောင်းချင်တဲ့အတွက် အသံတွေပေးပါတယ်။
(နောက်နှစ်ဆက်မငှားတော့ ဘူးတို့ ကုန်ဈေးနူန်းတွေက တစ်နေ့တစ်ခြားတက်နေတယ်တို့ပေါ့)
အိမ်လခ တစ်လတစ်ရာဆိုရင် (2)နှစ်တွက်ဆိုတော့ 2400ကျပ်ပေါ့။
အဲဒါကို စပေါ်က 4000ကျပ်လောက်တင်ရထားရပါတယ်။
အိမ်လခကို အဲဒီစပေါ်ထဲက နူတ်သွားပေါ့။
နောက်ဆက်ငှားလို့ စာချုပ်ရင် သူတောင်းတဲ့စပေါ်ပေးတဲ့အခအရင်နှစ်ကကျန်တဲ့ငွေထဲကို လိုငွေဖြည့်ပေးပေါ့။
မနက်ထ ထမင်းချိုင့်ကိုယ်စီနဲ့အလုပ်သွား ညနေပြန်လာ။
ထမင်းစား သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ထိုင်။
မိုးချုပ်မှအိမ်ပြန် ဆိုတော့ ဒီအိမ်လေးက ညအိပ်ရုံလောက်ဘဲနေဖြစ်ပါတယ်။
(မှတ်မှတ်ရရ ပြောရရင် 84လမ်းနဲ့32လမ်းဒေါင့်က ပွဲထိုင်ကိတ်မုန့်တိုက်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးဖွင့်သေးတယ်။
ညပိုင်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အုပ်စုက ဗန္ဒာပင်အောက်က ခုံမှာထိုင်ပြီး လေပေါတတ်ကြ ငြင်းကြ ရီစရာတွေတဟား
ဟားနဲ့ပြောတတ်ကြပါတယ်။အခုတော့ အဲဒီဆိုင်လေးက မရှိတော့ပါဘူး။
ပိုင်ရှင်တွေက သတိရ မရတော့ မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီတုံးက ညလက်ဖက်ရည်ဝို်င်းလေးကိုသတိရနေတုန်းပါ)။
ကျွန်တော်အဲဒီအိမ်လေးကို သုံးကြိမ်မြောက်ဆက်ငှားဘို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အိမ်ရှင်က ဆက်မငှားဘူး ရောင်းမယ်ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာအဲလောက် မရှိသလို ထုတ်ချေးပေးမယ့်သူလဲမရှိပါဘူး။
ငွေချေးတယ်ဆိုတာကလဲ ပြန်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်သူကိုသာ ချေးကြတာကိုး။
ပေးတောင်မှ ကိုယ် ကိုတိုင်ကလဲမယူရဲပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ငှားနေတဲ့ဝင်းကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ဒေါင့်ကခြံထဲမှာ အုတ်ဂူကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်။
ဘာအမှတ်အသားမှမပါတော့ ဘယ်သူ သေလို့ မြုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာလဲဘယ်သူမှ တိတိကျကျမသိပါဘူး။
(အဲဒီဂူကြီးက ရှေးက မင်းညီမင်းသားတစ်ပါးကွယ်လွန်လို့ သူပိုင်အိမ်ဝင်းထဲမှာမြုပ်ထားခဲ့တာကို
သူ့ရဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ အနွယ်တော်တွေက ပြောလို့ ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက ပြန်ထိန်းသိမ်းပြီးစောင့်ရှောက်မှာလို့သတင်းတွေထွက်လာတာပါ။
တကယ်လို့များ ကောလဟာလထွက်ကလာသလို ဒီဝင်းကြီးကို ပြန်သိမ်းမယ်ဆိုရင် အားလုံးဖယ်ပေးရမှာကသေချာသလောက်ပါဘဲ။
(ဒါပေမယ့် အခုအချိန်ထိ ဘယ်သူက မှမသိမ်းပါဘူး ။
လက်သွက်ခြေသွက်ရှိတဲ့ တစ်ယောက်က အဲဒီအုတ်ဂူရှိတဲ့ခြံကြီးကို သူလိုချင်တဲ့ဈေးနဲ့ဆစ်ဝယ်ပြီး
ဒီတော့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုတာ ဘာလက်စလက်နမကျန်ခဲ့တော့ ဘယ်သူကမှလဲ လာမသိမ်းတော့ဘူးလေ။)
ကျွန်တော်မဝယ်ဘူးဆိုတော့ သူသမီးကို ဒီအိမ်ကို အမွေပေးမယ်လုပ်ပြန်ရော။
ကျွန်တော်ဆက်နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့အိမ်မကြီးရဲ့နောက်မှာ ခြေတံရှည်အိ်မ်လေးဆောက်ပေးမယ်
အိမ်စပေါ်ကို ခြောက်ထောင် တင်ရမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ပိုက်ထပ် ရှာရပြန်တယ်။
ကျွန်တော်ကလဲ သူများနဲ့တွဲမနေချင်ဘူးဆိုတာကို အစကတည်းကပြောပြီးသား ဆိုတော့ စကားတွေပြောရတော့တာပေါ့။
အိမ်ရှင်က တစ်ခန်းထဲယူရင်တစ်လ 125ကျပ်နဲ့ယူ နှစ်ခန်းလုံးဆိုရင် တော့ 150ကျပ် စပေါ်က 7000ကျပ် ပေးလို့ပြောပြန်
ပါတယ်။ခက်တာက ကျွန်တော်က အိမ်လခ ကို အစိတ်တိုးပေးပြီး နှစ်ခန်းယူနိုင်ပါတယ်။
သူထပ်တောင်းတဲ့စပေါ်ငွေ တစ်ထောင်မပြောနဲ့ တစ်ရာကို တိုးပေးဖို့ ပိုက်ဆံမရှိတော့တာ။
နောက်တော့ ကျွန်တော်ကလဲအခန်းပိုကို မငှားနိုင်ဘူးလို့ပြတ်ပြတ်သားသားပြောတော့မှ
သူတို့ကလဲ နောက်ထပ်လူငှားမတင်ပါဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်။
နောက် ကိုးလ ဆယ်လ လောက် လကြာတော့ သူတို့ရဲ့အမျုးိတစ်ယောက်ဖွင့်ထားတဲ့ ဝပ်ရှော့မှာ ခေါ်ထားတဲ့နယ်ကလာတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မယူလိုက်တဲ့ အခန်းမှာလာထားပါတော့တယ်။
အငှားထားတာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့အမျိုးကို ကူညီတာပါပေါ့။
ခက်တာက အဲဒီကလေးတွေက ညည ကျတော့ မအိပ်ဘဲဆော့ကြ စကားတွေများကြ ရန်တွေဖြစ်ကြနဲ့ဆိုတော့ နေရတာ
ဒီလိုနဲ့ဘဲ နှစ်စေ့လို့ နောက်တစ်ခါစာချုပ်ချုပ်ခါနီးတော့ သူတို့က ဆက်မငှားဘူူးတို့ဈေးတက်မယ်တို့ဆိုပြီး လေသံတွေထွက်
ဖြစ်ချင်တော့ မဒမ်ပေါက်ကလဲ အလုပ်က ရာထူးတက်ပြီးနယ်ပြောင်းရမယ်ဆိုဖြစ်လာတော့ အလုပ်ကထွက်လိုက်ပါတယ်။
အဲတော့ မဒမ်ပေါက်က အိမ်မှာအမြဲနေရသလိုဖြစ်နေတော့ အရင်က အိမ်မှာအမြဲမနေတော့ မသိရတဲ့ဒုက္ခတွေကို သိလာရပြန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အောက်တဲ့တဲ့မှာ သူတို့ထမင်းဟင်းချက်တဲ့မီးဖိုကို ထားပါတယ်။
အဲတော့ ထင်းသုံးပြီး သူတို့ထမင်းဟင်းချက်ရင် ထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေက အိမ်အပေါ်ထပ်မှာလူနေလို့မရအောင်လုံးတက်
ပြောပြန်တော့လဲ “မတတ်နို်င်ဘူး”ဆိုတဲ့ပုံစံဘဲပြောတော့ မပြောင်းနိုင်မကင်းနိုင်သေးတော့ အောင့်အီးနေရတာပေါ့။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော်နောက်ပြောင်းလိုက်တဲ့အလုပ်က အလုပ်သမားတွေအတွက်ဆောက်ထားတဲ့အခန်းအပိုရှိတယ်
(အိမ်ပြောင်းတဲ့နေ့မှာ ကျန်နေတဲ့အိမ်စပေါ်ကို မနည်းပြန်တောင်းယူရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က 1996 ခုနှစ်ပါ။
အဲဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ဆီမှာကျွန်တော် 12နှစ်တိတိငှားနေခဲ့ရပါတယ်။	)
အဲဒီအိမ်ကပြောင်းချိန်မှာ ကျွန်တော် တစ်လကို လခ သုံးထောင်ကျပ်ရပါတယ်။
ဒီတန်းလျားမှာ နေနေတုံးမှာဘဲမြို့သစ်ထဲမှာနေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့ဘေးအိမ်ကရောင်းမယ်။
အိမ်ကတော့ မကောင်းဘူး ပြန်ဆောက်မှရမယ်။
ဆိုဈေး ကျပ် တစ်သိန်း ပါတဲ့။
အဲဒါက 1990 ခုနှစ်ပါတ်ဝန်းကျင်လောက်ကပေါ့နော်။
73လမ်း လမ်းကြမ်းပေါ်က မနောဟရီလမ်းမရောက်ခင်မြောက်ဘက်တစ်ပြမှာရှိတာပါ။
ပြန်ရောင်းချင်တဲ့သူက အဲဒီမြေလေးကို ခြောက်ထောင်နဲ့ဆွဲထားတာပါတဲ့။
1986ခုနှစ်လောက်က ဝယ်ထားတယ်လို့တော့ မရေမရာပြောဘူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မှာ ဒီမြေကွက်ကို ဝယ်နိုင်လောက်တဲ့ ပိုက်ဆံမရှိတော့တန်လို်က်တာနော်ဆိုတာကလွဲပြီး
အရင်က ကန်စွန်းခင်းတွေနဲ့ရေကန်ကြီးဘဲရှိနေပြီး လမ်းတောင်ကောင်းကောင်းမပေါက်သေးတဲ့ အခုမန္တလေးကန်တော်ကြီး ဖြစ်လာမယ့်(တက်သိမ်းအင်း)နေရာမှာ တဲပေါ်ကလူ တိုက်ပေါ်ရောက်ရေးဆိုတဲ့စီမံချက်ပေါ်လာပြီး
အဲဒီတုန်းက ကန်တော်ကြီး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မယ့် ဧရိယာထဲမှာမလွတ်သူတွေရော
တိုက်ခန်းဆောက်တဲ့နေရာကို ပိုင်တဲ့ မြေပိုင်ရှင်တွေကိုရော
ကျပ်တစ်သိန်းခွဲ ငွေသွင်းခိုင်းပြီး တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအစားပြန်ပေးပါတယ။်
တိုက်ခန်းက ဆယ်ခန်းတွဲ၊သုံးထပ်ဆိုတော့တိုက်ခန်းတွဲတစ်တွဲမှာ အခန်းသုံးဆယ်ပါ ပါတယ်။
တိုက်ခန်းဖွဲ့တည်ပုံကတော့ အရှေဘက်လှည့် နဲ့အနောက်ဖက်လှည့် ကျောချင်းကပ်ရက်က နှစ်တွဲ၊
တောင်ဖက်လှည့်နဲ့ မြောက်ဘက်ကပ်ရက် ကျောချင်းကပ် က နှစ်တွဲ ဆိုတော့ စုစုပေါင်းအခန်းတွဲ(8)တွဲရှိပါတယ်။
တစ်ခန်းစီမှာ ရေပေးရေးက ရေမီတာ လျှပ်စစ်မီးမီတာ သီးသန့်စီဖြစ်ပါတယ်။
မန်းလေးမြို့စည်ပင်သာယာက တည်ဆောက်ထားတဲ့ စည်ပင်ပိုင်တိုက်ခန်းတွေပါ။
အဲဒီမှာ တိုက်ခန်းရတဲ့သူတွေက ပြန်ရောင်းကြပါတယ်။
ပြီးတော့ နေရာလွတ်နေသေးတဲ့ ကန်တော်ကြီးအနောက်ဘက်ခြမ်းက တာရိုးနားမှာကျူးကျော်တဲတွေထိုးပြီး
နေတဲ့သူကနေ မြောက်ဘက်ရပ်ကွက် ဒေါနခြံထဲက အိမ်ငှားခသက်သာတဲ့အိမ်တွေမှာ ပြန်ငှားနေကြပါတယ်။
အပေါ်ဆုံးထပ် သုံးသိန်း အလယ်ထပ် ငါးသိန်း အောက်ဆုံးထပ် ခုနှစ်သိန်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကလဲ ကြားသာကြားရတာ မဝယ်နိုင်သေးပါဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တစ်လကို လခ ရှစ်ထောင်ကျပ်ရနေပါပြီ။
နောက်အဲဒီအလုပ်သမားတန်းလျားမှာ နေတာ (2)နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာ လုပ်ငန်းကအလုပ်သမားတွေတိုးလာတော့သူတို့အတွက်နေရာဖယ်ပေးဘို့ဖြစ်လာတာရယ် နေလို့ထိုင်လို့ အဆင်မပြေစရာလေးတွေကြုံလာတာကြောင့် ဒီအလကားနေရတဲ့အခန်းဖယ်ပေးရမယ်ဖြစ်လာပါတယ်။
ကံကောင်းခြင်တော့ ဒီလို ဖြစ်နေချိန် အဖေ့ဘက် ကတော်တဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက်က မြို့သစ်ထဲမှာ သူ ငါးသိန်းနဲ့ဝယ်ထားတဲ့
အစက အိမ်ငှားတွေတင်ထားတာ အခုတော့ ဆက်မငှားတော့ ဘူး။
ကျွန်တော်ကလည်းတန်းလျားမှာနေဘို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေချိန်ဆိုတော့ မြို့သစ်ကိုပြောင်းနေဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလိုလဲ့ဆိုတော့ 1995ကနေစပြီး အလကားရတဲ့အိမ်တွေမှာလိုက်နေတော့ အိမ်လခသက်သာတာရယ်
လုပ်ငန်းမှာနည်းနည်းလေးတာဝန်ပိုယူရတော့ လခလဲတက်လာတာရယ် နောက်အဲဒီတုန်းကလုပ်နေတဲ့
အလုပ်က နှစ်ကုန်တယ်ဆိုရင် ဘောနပ်ပေးတာက သိန်းဂဏန်းရတယ်ဆိုတော့လက်ထဲမှာငွေနည်းနည်းစုမိပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် တစ်ရာကျပ်ဖြစ်နေသလို ကျွန်တော်ရတဲ့လခကလဲ သောင်းဂဏန်းတော့ဖြစ်လာပါပြီ။
အဲဒီမြို့သစ်မှာနေလို့ အဆင်ပြေခါစရှိသေးတယ် အိမ်ပိုင်ရှင်ဦးလေးနဲ့သဘောကွဲလွဲဘို့ဖြစ်လာပါတယ်။
သက္ကရာဇ် 2000ပြည့်နှစ်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ မြိုသစ်ကမြေဈေးတွေက တက်ရိပ်ပြသလို ပွဲစားတွေကလည်း
နဂိုရ်ဝယ်ထားတဲ့ သောင်းဂဏန်း သိန်းဂဏန်းလေး လောက်ကနေ သိန်းဆယ်ဂဏန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်ကလဲ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး အိ်မ်လာလာကြည့်တဲ့ပွဲစားတွေကို မျက်စေ့နောက်တာနဲ့ “အိမ်မရောင်းပါ”
အဲဒီအချိန်မှာ လောကထုံးစံအတိုင်း အခြားမြို့မှာနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဦးလေးကို ကျွန်တော်ကဘဲဒီအိ်မ်ကိုအပိုင်သိမ်းဘို့
ကြံစည်နေတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပြောတဲ့သူရှိတော့ ဦးလေးက ကျွန်တော်ကိုမတိုင်ပင်ဘဲအိမ်ကိုရောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီခြံလောက် နေရာအနေအထားမကောင်းတဲ့ဒူး ကြားလမ်းထဲကအိမ်လေးကိုတောင် သိန်းလေးဆယ်ရပါတယ်။
အိ်မ်ကလဲ အမိုးအကာပါတယ်ဆိုရုံလေး လျှပ်စစ်မီတာတော့ ရှိတယ် ။
ကျွန်တော်က မရောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ဦးလေး နေတဲ့မြို့ထိပွဲစားတွေက လိုက်သွားပြီး သိန်းသုံးဆယ်နဲ့ဝယ်သွားပါတယ်။
အဲတော့ ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ ဦးလေး စကားတွေများကြတာပေါ့။
ကျွန်တော်ကိုမတိုင်ပင်ဘဲလုပ်ရမလားဆိုတော့ သူပုံစံက ကျွန်တော်က ဖယ်မပေးချင်လို့ပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကလဲ နောက်ဒီထက်ဈေးတက်လာတော့မှာ မရောင်းရင်လဲရသေးတယ်လို့ တွေးတာကိုး။
အငှားတော့ မနေချင်တော့ဘူးလို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ပေမယ့် မန်းလေးလိုမြို့ကြီးမှာ (2)ပါတ်အတွင်းအိ်မ်ငှားဘို့ဝယ်ဘို့က
ဖြစ်ချင်တော့ အသိတစ်ယောက်က ပိုက်ဆံပိုတယ်ဆိုရင် မြေတွေတိုက်ခန်းတွေ အပိုဆောင်းဝယ်ထားတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့
ပထမဆုံးသွားကြည့်တဲ့နေရာက ဧရာဝတီမြစ်ကန်ပါတ်လမ်းဘက်က ဧရာထွန်းဆိုတဲ့တိုက်တန်းလျားကြီး မှာပါ။
အဲဒီဧရာထွန်းတိုက်ခန်းတွေက အပေါ်ဆုံးထက်ကမှ လမ်းနဲ့အညီ ၊အောက်ထပ်တွေက လမ်းမရဲ့အောက်ချိုင့်ထဲမှာ။
လမ်းမပေါ်မှာကားဖြတ်သွားရင် ဖုံတွေက အိမ်ထဲဝင်လာပါသတဲ့။
ဒီတိုက်ခန်းတွေကလဲ တဲပေါ်ကလူ တိုက်ပေါ်ရောက်ရေးစီမံကိန်းထဲက တိုက်ခန်းတွေပါဘဲ။
ကျွန်တော့်အလုပ်ရှိတာက မြို့ထဲ တိုက်ခန်းကမြို့အနောက်ဖက်ဆုံးဆိုတော့အဆင်မပြေပါဘူး။
နောက်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့တချက်ကလဲ အဲဒီဘက်က တိုက်ခန်းဝရံတာတွေက တစ်ဆက်ထဲဖြစ်နေတာပါ။
နောက်တစ်နေရာကတော့ အခုတက်သိမ်းအင်းကန်တော်ကြီးဘက်က တိုက်ခန်းရှိတယ်လို့ပြောတာနဲ့သွားကြည့်တော့
တိုက်ခန်းကတော့ ဆယ်လုံးတတွဲ သုံးထပ်ပါ။
သူဝယ်ထားတဲ့အခန်းက မြေညီထပ်ဖြစ်နေတာရယ် ဘုရားကြီးအနောက်ဘက်ကျောက်ဆစ်တန်းကိုကွေ့လိုက်တာနဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေကိုရောက်သွားလို့ပါ။
မြို့ထဲနဲ့လဲနီး ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရင် ဆယ်ငါးမိနစ်ဆိုရောက်ပါတယ်။
ပါတ်ဝန်းကျင်မှာက သစ်ပင်လေးတွေစိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ဆိုတော့ နေရာလေးကလဲအေးချမ်းပါတယ်။
(နောက်နေပြီးမှသိရတာကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ရေကြီးတဲ့နှစ်မှာဆို ကန်တော်ကြီးကလျှံကျလာတဲ့ရေတွေက
တိုက်ခန်းတွေဘက်မှာလာပြီး နေကြတာ မိုးမကုန်မချင်းပါဘဲ)
ဈေးကတော့ ဆယ့်ငါးသိန်းဆိုတော့ စိတ်တော့လေသွားပါတယ်။
20×30 ဆိုတော့ ပုံမှန်ကွက်ရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့။
ရေမီတာ မီး မီတာ သူများနဲ့တွဲသုံးရမယ်။
ဒါပေမယ့် မြို့သစ်ထဲကိုမနေချင်တော့ဘူး ။
အဲဒီတုန်းကမြို့သစ်ကလမ်းတွေကကျဉ်း မိုးရွာရင်ရေဝင်ရွှံ့မြေတွေကစေး မြို့ထဲနဲ့လဲဝေးကိုးဗျ။
ခက်တာက ကန်ုတော်ကြီးတိုက်ခန်းကိုလိုချင်ပေမယ့်ပိုက်ဆံ့ မပြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဒီကိစ္စကိုအလုပ်ရှင်နဲ့တိုင်ပင်တော့ လိုတဲ့ငွေသူခဏစိုက်ထားပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ဘဲ ယူဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
တကယ်လဲဝယ်ဖြစ်သွားတော့ ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့ သီးသန့်နေရတဲ့ အိမ်မဟုတ်တောင်ကျောခင်းစရာတစ်နေကို
ကံကောင်းတယ်ဆိုရမလားဘဲကျွန်တော်ပြောင်းလာပြီးမကြာခင်မှာ ဒီတိုက်ခန်းတွေကိုပါတ်ပြီး ကန်တော်ကြီးနဲ့ဆက်သွားတဲ့မြေလမ်းတွေကိုကတ္တရာလမ်းခင်းလိုက်တာရယ် ငွေကြေးဖောင်းပွမူ့ကြောင့်ရယ်တိုက်ခန်းဈေးတွေ ထုးိတက်သွားပါတယ်။ကန်တော်ကြီးဘက်ကလဲ တော်တော်လေးကိုစည်ကားတဲ့အရပ်ကလေးဖြစ်သွားပါတယ်။
မြေညီထပ် သိန်းခြောက်ဆယ် ဒုတိယထပ်သိန်းလေးဆယ် အပေါ်ဆုံးထပ် သိန်းသုံးဆယ်။
ကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးနဲ့လဲနေရတယ် ဈေးကလဲတက်တယ် လခစားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုအချိန်မှဝယ်မယ်ဆိုရင်
ဘယ်လိုမှ အနားမကပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ ကိုယ့်လုပ်ရပ်အပေါ်ကိုယ်ကျေနပ်မိသလို မတိုင်ပင်ဘဲအိ်မ်ရောင်းလိုက်တဲ့ဦးလေးကို
တောင် ညတိုင်းရှိခိုးလို့အိပ်ပါတယ် ကျေးဇူးရှင်စာရင်းထဲသွင်းလို့ပေါ့။
သူသာ သူ့ခြံကိုမရောင်းရင် ကျွန်တော်လဲ ဒီတိုက်ခန်းကိုဝယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တာ ရာနူန်းပြည့်ပါဘဲ။
အခုလက်ရှိ2010အလွန်မှာတော့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ကတော့ လတ်တလောမှာရပ်သွားတယ်ဆိုနို်င်ပါပြီ။
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် နှစ်ရာ ပလာတာထပ်တစ်ရာ ကြိုက်တာစား 250။
ခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲ(ခြောက်ရာ မြီးရှည်( ငါးရာ) မုန့်ဟင်းခါး(လေးရာ )အကြော်တစ်ခုငါးဆယ်မှာရပ်နေတာကြာသွားပါပြီ။
ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းရဲ့အစွန်ဆုံးဘက်က အခန်းတစ်ဆယ် 145သိန်း (အစွန်ဆုံးကအခန်းတွေက သူ့ဘေးနားကမြေကွက်လပ်ကို ခြံကာပြီးယူကြတော့ ပိုကျယ်တယ်ဈေးပိုရတယ်ပေါ့)
ဒုတိယထပ် သိန်း 90 နဲ့ အရောင်းအဝယ် တည့်သွားကြတာ ကြားရတာအားရစရာကြီးပါဘဲ။
ကျွန်တော်ဒီအခန်းဝယ်စက အောက်ထပ်ငှားက တစ်လသုံးသောင်းအလယ်ထပ်နှစ်သောင်းအပေါ်ထပ်တစ်သောင်း။
အခုလက်ရှိအောက်ထပ် 7သောင်းအလယ်ထပ်ငါးသောင်း အပေါ်ဆုံးထပ် လေးသောင်း။
ကိုယ်များဝယ်မထားမိရင် ကိုယ်တစ်လရှာတဲ့ ပိုက်ဆံ အိမ်ငှားခနဲ့တင်ကုန်ရချည့်ရဲ့လို့တွေးရင်း
ကိုယ်ဝယ်ထားမိခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းအတွက် စိတ်ထဲမှာကျိတ်လို့ ကျေနပ်မိဂုဏ်ယူမိတာကလဲအမှန်ပါဘဲ။
(လူ့စိတ်များသွားချင်တယ်ဆိုရင် နှစ်ပေါင်းများစွာကို နာရီပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းနဲ့ပြန်ရောက်သွားနိုင်တာ ဆန်းတယ်ပြောရမှာဘဲနော်။)
အိုရီယင်တယ်ဟောက်စ်မှာ ကျင်းပမယ့် မင်္ဂလာဆောင်ကို ညနေစောင်းရောက်တော့ ကိုအောင်မောင်းနဲ့နှစ်ယောက်သားသွားကြ
ခဏနေတော့ ဘီယာပုလင်းတွေအရက်တွေရောက်လာတော့ သောက်တတ်သူကသောက်ပေါ့။
ပုလင်းတွေရောက်မှဘဲ အစက ခပ်တည်တည်ထိုင်နေကြတဲ့လူတွေက အကိုသောက် ညီလေးသောက်ဆိုပြီးခဏအတွင်းမှာ
ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ဝိုင်းကလူတွေက ပြောရင်းနဲ့သိလာတာက အိမ်မြေပွဲစားတွေရယ် ကျောက်သမားတွေရယ်ဖြစ်နေပါတယ်။
သူတို့တစ်တွေက အစကတော့ နည်းနည်းပါးပါးဘဲစကားတွေပြောနေကြပေမယ့် အရည်လေးများလဲဝင်လာရော စကားတွေ
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ပွဲစားများဆိုတော့လဲ ဘယ်အကွက်ကဘယ်လိုပေါက်ပြီး ဘယ်သူကဘယ်လိုဈေးရသွားတယ်တို့
ဘယ်ကျောက်က ဘယ်လောက်ဆိုတာ ဘယ်လောက်နဲ့ပွဲတိုက်ပြီး ခွဲချလိုက်တာ ဘယ်လောက်အောင်သွားတယ်ဆိုတာတွေပေါ့။
ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီအထဲမှာ မြိုသစ်တုံးက ကျွန်တော်နဲ့ နည်းနည်းမျက်မှန်းတန်းမိတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းပါလာပါတယ်။
“ အကိုရာ အကိုတို့နေသွားတဲ့အကွက် ကိုရောင်းတာနည်းနည်းစောသွားတယ်။ အကို့နောက်ဝယ်တဲ့သူက (2)နှစ်လောက်
နေတော့ ခြောက်ဆယ့်ငါးနဲထုသွားတယ်။နောက်ဝယ်တဲ့သူက ကိုးဆယ်ရတော့မြတ်ပြီဆိုပြီးလက်လွှတ်လိုက်တယ်။
သိပ်မကြာသေးဘူးနောက်ဆုံးလူက 150ရလို့ဆိုပြီးရောင်းပြီး ရဲမွန်ဘက်ပြောင်းသွားတယ်၊ကြားထဲမှာဆယ်နှစ်လောက်ဘဲကြာတာလေ။ အကိုတို့နာတာဘဲ”လို့ပြောတော့
ကျွန်တော်က 150ဆိုတော့ သိပ်တော့မကွာသေးပါဘူး 5ဆလောက်ဘဲတက်တာပါလို့ပြောလဲပြောရော အဲဒီလူက ကျွန်တော့်ကို
တီဗွီကြော်ငြာမှာ လာလာနေတဲ့ ဟဲဗီးဖြုးိကလေးပြောနေကြ “တယ်ပိန်းတာဘဲ”လို့ သဘောမျုးိရတဲ့ အကြည့်တစ်ချက်ကျွန်တော့်
အဲဒီတော့ မှဘေးနားက ထိုင်နေတဲ့တစ်ယောက်က “မဟုတ်ဘူးလေးလေးရ ကိုလွင်ပြောတဲ့ 65ဆိုတာ သိန်း650 90ဆယ်ဆိုတာ သိန်း900 150ဆိုတာ သိန်းထောင့်ငါးရာကို ပြောတာ။ လေးငါးဆဘယ်ကမလဲ အများကြီးကိုတက်သွားတာပါ”
လို့ပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော့စားလက်စ ဝက်နံကင်က လည်ပင်းမှာ နုင်သွားသလိုပါဘဲ။
ခဏနေတော့ ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်လောကကြီးဟာသူတို့အတွက်သာယာနေတယ်ဆိုတာ တန်းသိ နိုင်တဲ့လူငါးယောက်
ဝင်လာပါတယ်။အသားဖြူဖြူ လူဝဝ ငါးယောက်ပါ။
သူတို့လဲဝင်လာတာမြင်တာနဲ့ သတို့သားဘက်ကလူတွေ လှုပ်လှုပ်ယှားယှား ဖြစ်သွားသလို အူယားဖားယား
ကျွန်တော်တို့သာထိုင်စရာနေရာရှာရတာပါ သူတို့အတွက် က သီးသန့်ချန်ထားပြီးသားပါ။
သူတို့ကိုမြင်တော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူထိုင်နေတဲ့ပွဲစားတွေလဲ ပါးစပ်တပြင်ပြင်ဖြစ်နေပါတယ်။
ငါးယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီး ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ လှမ်းလက်ပြပါတော့
ကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာခြင်းဆိုင်မှာထို်င်နေတဲ့ညမှာတောင် နေကာမျက်မှန်ကိုမချွတ်တဲ့တစ်ယောက်ကလဲပြန်ပြုံးပြရင်းက လက်ပြန်ပြပါတယ်။ပြီးမှ ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကို တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ပြီး
“ဘောစိအစစ်တွေလေ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပါတ်က 65လမ်း ပေါ်က တကွက် သိန်းနှစ်သောင်းနဲ့သူအောင်သွားတာ”
“အဲဒီသူယူလိုက်တဲ့အကွက်ရဲ့တောင်ဘက် ငါးအိမ်ကျော်ကအကွက်ကလဲ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကထင်တယ်
မြို့သစ်မြေကွက်ဈေး အမြင့်ဆုံးကစံချိန်တင် သိန်းသုံးထောင်နဲ့ရသွားတာလေ၊အခုအောင်သွားတဲ့အကွက်နဲ့တစ်တန်းထဲဘဲ”
လို့ထပ်ဖြည့်ပြီးပြောတော့ ကျွန်တော့ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့ ခပ်ဝဝ ထိပ်ပြောင်နေတဲ့လူကလဲ
“အခု 73လမ်းက ခင်းပြီးသွားတော့ ရှင်ပင်အုံးအင်နားကအကွက်တွေတောင် ထောင်ဂဏန်းရတယ်။
နိုင်ငံတကာဘောလုံးကွင်းဆောက်မယ်ဆိုတော့ အရင်က မြက်တောတွေက ဈေးတွေထခေါ်ကုန်ရော”လို့ဝင်ဖြည့်ပေးပါတယ်။
“လမ်း80ကခင်ဗျားတို့လိုက်နေတဲ့ နေရာတောင်မနေ့က တည့်သွားပြီ ။မျက်နှာဖွင့်တစ်ပေပါတ်လည်ကို သိန်းတစ်ထောင် နီးနီးဆိုတော့ သိန်းသုံးသောင်းလောက်နဲ့တဲ့သွားတယ်ပြောတာပဲ။နောက်သူနဲ့မျက်နှာခြင်းဆိုင်ဝင်းကလဲတည့်သွားပြီ သုံးသောင်းခြောက်ထောင်တဲ့ “လို့ ခပ်ပိန်ပိန်လူက ပြောတဲ့အခါ။
“ဈေးတွေမြောက်တာကတော့ လက်လန်တယ်။အခု လမ်းမတန်းမပြောနဲ့ မြို့လယ်ဧရိယာ 84လမ်းအောက်ပိုင်း 30-35 ဒူးကြားလမ်းက မြေကွက်တောင် တကွက်ဘယ်လောက်ဆိုတာမပြောတော့ တစ်ပေပါတ်လည်ကို 7ကျပ်ခွဲနဲ့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တာ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်ငါးရက်လောက်က အဲဒီဒူးကြားလမ်းက (မျက်နှာဖွင့် 15အရှည်45)ကို တပေ-ငါးကျပ်ခွဲနဲ့ဆွဲထားတာ
အဲဒါကိုမှလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူက ခွန်နှစ်ကျပ်ခွဲပေးပြီးဇွတ်ယူသွားတယ်”လို့ လဲ မစားရဝခမန်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်မအတော့ပါဘူး။သူပြောတဲ့ ခွန်နှစ်ကျပ်ခွဲဆိုတာ 75သိန်းကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာပါ။
အခုခေတ်မှာမြေဈေးက တကွက်လုံးဈေးမပြောတော့ဘဲတစ်ပေပါတ်လည်ဈေးဘဲပြောတယ်ဆိုတာကို သူတို့ပြောမှသိရတာပါ။
သူတို့ကတော့ဆက်ပြောနေလိုက်ကြတာ သိန်းသန်းကုဋေ တန်တဲ့အကြောင်းတွေပါဘဲ။
ဘယ်နားကဘယ်လောက် ဘယ်သူကဘယ်လိုအောင်ပြီး ဘယ်သူကတော့ ပွဲခဘယ်လိုရလိုက်တာဆိုတာတွေပေါ့။
ဘေးနားကအတူထိုင်တဲ့လူတွေက ကျွန်တော်နဲ့အောင်မောင်းကို “လေးလေးစား “ဆိုပြီးဟင်းတွေထည့်ထည့်ပေးနေကြပါတယ်။
ပါးစပ်ကသာ ကျွေးတာတွေကို စားသာစားနေတာ စိတ်ထဲမှာတော့ ဘယ်လိုလူတွေကများ ဘယ်
ကောင်းတာပေါ့…….။ ဒါမှ သူများတို့ မန္တလေးလာရင် ပိုနီးသွားမှာ……….။ လုပ်ကြပါဗျို့ အားပေးပါတယ်……………………. ။
အင်…ကိုပေါက်ရေးပြမှဘဲ မန်းလေးရဲ့မြေဈေ းအကြောင်း
အမလေးမောလိုက်တာ…. အူးအူးပေါက်ရဲ…နေမကောင်းပါဘူးဆိုမှ မျက်စိတဆုံးပဲ… မန်.ချက်…
ကျနော်အကြိုက်ဆုံး ကတော့…. အူးပေါက်ရဲ.ဇွဲပဲ… လေးစားပါတယ်.
အဲဒါက အခုမှ မန်းတာမဟုတ်ဘူး ကျနော်ရေးပြီးသားပိုစ်ကို တစ်ဝက်တစ်ပျက် ပြန်တင်ပေးလိုက်တာ။
ကောင်းပါတယ် ကောင်းပါတယ် … ဒီထက်ကောင်းတာမရှိတော့ပါ….
အင်းပေါ့လေ ပြောပြန်ရင်လဲ လွန်ရာကျအုံးမယ်… ကျွန်တော် တို.မန္တလေးသားတွေက မန်းလေးကို ချစ်ကြပါတယ်… ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံလောက် ဘယ်သူမှ မချစ်ကြတော့ လဲ မြို.သစ်ကို ပြေးရတော့တာပေါ့ ကိုမန်းလေးသားပြောသလိုလေး လုပ်ရင်တော့ သိပ်ကောင်းတာပဲ…ပေါ့.. အဲလို ကိုယ့်မြို.ကို ချစ်ကြတာတော့ လူတိုင်းချစ်မှာပဲလေ.. မန်းလေးသား၊သူ တွေက ပိုဆိုးသေး … ဒါပေမယ့် ဗျာ အခြေအနေမပေးရင်တော့ ဘာမှလုပ်လို.မရဘူးလေ… ဟုတ်တယ်ဟုတ်…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို.ချစ်တဲ့ မြို.ကို တိုးတက်အောင်လုပ်တာ ကြိုက်ပေမယ့် လက်ဝါးကြီးအုပ် ဘေးထုတ်တာတော့ အသည်းနာ ပါတယ်…
ကျွန်တော် အိမ်ကိုတောင်လာဝယ်နေကြသေးတယ်… ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ မရောင်းဘူး ဒါပဲ… စုပ်ပြတ်သတ်နေလဲ နေမှာပဲ..
ပြောနေရင်း ဒေါသဖြစ်လာပြီ တော်ပြီ……..
မလို ..မလို …
အခွင်ဆောင်ဆို့လည်း မလို ….
ရို့ .. ရို့ ….
လမ်းချဲ့မယ် စီမံကိန်းဝင်တယ်ဆိုပြီ းအဖယ်ခံမှာလား
လေးပေါက်ကလဲ ကျွန်တော် အိမ်ဖြင့် အရင်တုန်းက လမ်းအလယ်ခေါင်လောက်မှာ ခြံဝင်းအစရှိတာ…နောက်ဖေးဘက်ဆို ရင် တက်သိမ်းနတ်နန်းအထိကျယ်တယ်… အခုတော့ ဂျာ အဟင့်
ရှေ.မျက်နှာစာက လမ်းချဲ့. နောက်ဖေးက ဘုရားကြီးတိုက်တန်းဆောက် ကုန်ရော.. အခုတော့ မီးခြစ်ပုံး လောက်ပဲ အကျယ်ရှိတော့တယ်…
မြန်မာ ပြည် က လဝက တွေကြောင့်မြန်မာ ပြည်သည်မကြာမီတရုတ်ပြည်နယ်တခုဖြစ်တော့မည်။ ခေတ်မီသော မှတ်ပုံတင်စနစ်ကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။
အခုလို မန့်ပေးကြတဲ့ အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ပြောရရင် နောက်ဆို အများကြီး ဆက်ပြီးရေးဖို့ နည်းနည်း အားရသွားတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
အဲတော့ ဈေးကောင်းရတဲ့ မန်းလေးပထမမြိုသစ်ကမြေကွက်ကိုရောင်းပြီး